Top 7 Apps in Edit Photos on iPad
Waa maxay tafatirka sawirka?
Haddii aad tahay sawir aad u xiiseeya ama ma, tafatir sawir ahaan waa madadaalo aad u. Iyadoo gargaarka ah ee qaar ka mid ah tifaftirayaasha sawir cajiib ah, waxay idiin Celin karaan eegno gabi ahaanba kala duwan si ay xataa sawir aasaasiga ah. Hana u baahan tahay si aad u saaxir sawir ah si ay u awoodaan inay tan sameeyaan. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa editor sawir iyo qaar ka mid ah gacnta hal abuur leh ee maskaxda.
Waxaa jira daraasiin barnaamijyadooda editor sawir iPad laga heli karaa internetka. Tifaftirayaasha waxaa loogu talagalay qaar ka mid ah oo magac weyn ku domain technology. Waxay yihiin ammaan si ay u isticmaalaan iyo in yar oo ka mid ah hal-abuurka, waxaad samayn kartaa tafatirka sawir xiiso leh oo saafi ah. Tan iyo tafatirayaasha, kuwaas oo u ogolaan in aad ka bedel badan intii jeer aad doonayso, waxaad sii wadi kartaa ilaa aad ku qanacsan tahay. Waad beddeli kartaa midab ah ama daran ah ama dareen taabasho ama wax kasta oo aad doonayso in aad qabato oo sawir leh.
iPad tafatirka sawir
Khalkhalgelinta Image on iPad waa mid aad u suurto gal ah oo gebi ahaanba waa madadaalo. IPad ayaa wax badan ka beddelay tan iyo markii la bilaabay 2010kii oo hadda kuu oggolaanayaa in aad wax badan ka qabataa. Laga soo bilaabo madow & cad in collages guridda canabkiinna, aad sawir ah in si kasta oo ay u abuuraan saamaynta kuwaas oo ka ciyaari kara. Oo dadkii oo dhammu aad u baahan tahay waa app tafatirka sawir ku haboon ee aad kaniini. Waxaana jira barnaamijyadooda badan sida dhisay ee iPad, ha xitaa qaar ka mid ah oo u baahan ma inaad bixiso wax lacag ah.
Ha noo qabaa inay jidka this. Waa heer sare lagama yaabo in aad qaado aad iPad agagaarka sababta oo aad rabto in aad isticmaasho si guji sawiro. Tan laguma talinayo sababtoo ah waxaa jira qalabka sawir fiican ku dhawaad. Laakiin waxa aad sameyn karto waa geliyaan sawiro aad online oo ku helaan iyaga on your iPad. Hadda waxaad isticmaali kartaa app ee iPad in la abuuro mucjiso sawirada.
Photo Editor 14.2 MB Free 4.5+
Instagram 12.9 MB Free 4.5+
Photogene 24.3 MB $2.99 4.5+
SnapSpeed 27.9 MB Free 4+
Adobe Lightroom 44.6 MB Free 4+
Adobe Photoshop Touch 59.1 MB $ 9.99 4+
iPhoto 287 MB $4.99 4+
Editor ayaa sawir ka Axiem Systems waa mid ka mid ah qalabka tafatirka sawirka ugu doortay iPad. Editor kuu oggolaanayaa in aad xaalkaa photos aad si deg deg ah oo ay leeyihiin badan oo xiiso leh, halka aad joogto shaqada.
Editor sawir kuu oggolaanayaa in aad samayn wax walba oo la sawiradaada. Waxaad resize kartaa sawiro la isticmaalayo qalab dalagga. Waxaad isticmaali kartaa qalabka shaqooyin degdeg ah on sawiro aad - saarto isha casaan, qabsato ka duwan, iyo iftiin iyo codsan saamaynta sida aqua iyo strato. Waxaa jira qalab in laguu ogolaado in aad caddayn qoslayay iyo ceebaalowyo saarto. Waxa kale oo aad ka heli qalab loogu talagalay iibisga midabo on sawiro iyo mab ku daray.
Oo waxaa ugu wanaagsan oo dhan, waxaad ku dari kartaa qoraalka iyo qoraalka aad sawirradaada, iyaga oo xiiso leh.
Baro wax badan oo ku saabsan Photo Editor >> ( https://itunes.apple.com/us/app/photo-editor/id546821797?mt=8 )
Qof walba waa ogyahay oo ku saabsan Instagram, ama ugu yaraan in ka badan 200 oo million oo dunida og. Photo Customization marnaba si qurux badan oo cad ka hor inta app yimid galay qabka. Waa la wadaago sawir app ee ugu weyn dunida oo dhan iyo in aad had iyo jeer arki kartaa sawirada dambeeyay ka xiriirada aad.
Laakiin sidaas maaha oo dhan, maxaa yeelay, Instagram aad bixisaa Koox ka mid ah qaababka ay u xaalkaa photos aad. Custom loogu tala galay sida diirada in ay yihiin xor iyo toosan iyo saamaynta radial isku dari kara usii-wareeg laguu ogolaado in aad ku darto si qoto dheer si ay sawiro aad. Oo lagu wadaago sawiro aad gabi ahaanba waa fud.
Baro wax badan oo ku saabsan Instagram >> ( https://itunes.apple.com/us/app/instagram/id389801252?mt=8 )
Sida wargeyska banki, updated 2.0 version of Photogene waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee Chine tafatirka sawir u iPad waxa uu ka dhigayaa. Mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee app tani waa in uu leeyahay qalab loogu talagalay tafatirka iyo dhoofinta IPTC iyo metadata.
App Tani waxay bixisaa uugu buuxa ee qaababka ay ku jiraan dalagga, retouch, afaysto, denoise, toosi iyo hagaajin midabka. Qaar ka mid ah qaababka kale ee app waxa ka mid ah saamaynta gaar ah, presets oo sameeyey collage. App ayaa si toos ah u heli karaan maktabadda sawir aad, sidaas aad badbaadinayo dhibaato ah ee iyaga loo dhoofiyo. Its browser sawir gaar ah oo kuu ogolaanaya in aad eegto thumbnails badan oo sawiro aad. Oo waxaa ugu wanaagsan oo dhan, waxa kuu ogolaanayaa inaad resize sawiro aad sida aad u dhoofin in WordPress ama Picasa ama Facebook ama Twitter oo badan.
Baro wax badan oo ku saabsan Photogene >> https://itunes.apple.com/us/app/photogene-for-ipad/id363448251
Haddii aad rabto in aad editor xiiso leh sawir aad iPad, SnapSpeed ​​waa app aad u baahan tahay si ay u isticmaalaan. Waxay bixisaa waayo-aragnimo ah oo tayo sare leh tafatirka, wax aad rabto in aad u isticmaasho maalin kasta. SnapSpeed ​​ayaa horay ugu guuleystay abaal marinta 2 - Best Mobile Photo App 2012 abaal TIPA iyo iPad of the Year.
Auto Saxda ah waa inta badan la isticmaalo muuqaalada app in aad isticmaali karto si ay ula qabsadaan sawiradaada. Sawir kasta la fulineed karaa in aad ka jeelahay isticmaalaya feature soco Image ah. Meelaha gaarka ah iyo waxyaabaha in sawir lagu hagaajin karaa iyadoo la isticmaalayo ee Doorashada Dheellitir feature. Oo dhan sida diirada cusub sida Drama, Grunge, Retrolux, Janjeeri-Shift guridda waxaa laga heli karaa in app si aad tijaabada kartaa sawiro iyo dar in madadaalo weyn oo taabto qof ahaaneed. Si aan u dhammeys sawirkaaga, waxa kale oo aad isticmaali kartaa mid ka mid ah loox ee loo dhisay.
App ayaa sidoo kale Google+ dhisay gudaha galay, kuu oggolaadaan in aad sawiro aad sidaas oo kale oo.
Baro wax badan oo ku saabsan SnapSpeed ​​>> ( https://itunes.apple.com/us/app/snapseed/id439438619?mt=8 )
Adobe Lightroom siinayaa inaad hesho qaar ka mid ah qalabka ugu caan ah oo awood badan, iyadoo la isticmaalayo oo aad edit karaa oo abaabuli image kasta. Tani tafatirka app sawir ka shaqayn kartaa sawiro casriga ah iyo sidoo kale images cayriin qaaday kaamarooyinka DSLR. Tafatirka photos waxaa suurtagal ah iyada oo camera oo duudduuban iPad iyo sidoo kale Smart Falanqeynta. Presets Lightroom iyo qalab ogolaado in aad si kor loogu qaado sanamyadiinna.
Wixii la isticmaalayo nooca mobile ah app this, Adobe Lightroom 5 ayaa loo baahan yahay. Intaa waxaa dheer, mid ka mid ah qorshaha Creative Cloud waxaa sidoo kale looga baahan yahay. Qorshaha waxaa ka mid ah qorshe dhamaystiran, Photoshop Sawir Program, qorshaha Photography, Student iyo Macallinka Edition iyo kooxaha dhamaystiran qorshaha.
Baro wax badan oo ku saabsan Adobe Lightroom >> https://itunes.apple.com/us/app/adobe-lightroom/id804177739?mt=8
Isku darka Image marna ahaa fudud badan la Adobe Photoshop Touch. Marka aad tahay iyada oo codsanaya xiriiri xirfadle in ay sawiro aad, aad si toos ah sawirada aad ka iPad in Facebook iyo Twitter wadaagi karo. Codsiga waxaa loo isticmaali karaa sixiddiisa images sare-dhigsan ilaa 12 xildhibaan.
App waxay leedahay xudunta Photoshop qoreysa ay ka mid yihiin layers, filtarrada, hagaajin iyo qalabka doorashada. Qalabka dhadheer Xulashada u ogolaanaya saaridda ee qeybo ka mid ah image ah iyo qalab kala miiri Edge waxaa loo isticmaali karaa xubno ka qabashada u eg timo, taas oo haddii kale way adag tahay in ay doortaan. Feature Camera dhammaystira waa muujinta kale u fiican ee app in kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho camera iPad in la buuxiyo meelaha kala duwan ee layers ah.
Iyadoo app waxa aad ka heli xubin ka ah free Creative Cloud kuu ogolaanaya inaad si hagaagsan mashaariic aad u dhexeeya aad iPad iyo desktop. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo aad ka heli 2GB daruur ay xubno this kaydinta.
Baro wax badan oo ku saabsan Adobe Photoshop Touch >> ( https://itunes.apple.com/us/app/adobe-photoshop-touch/id495716481?mt=8 )
iPhoto ayaa naqshad cusub fududeeyey dhigaya fudud oo soo jiidasho badan abid. App waxaa loo isticmaali karaa in wax ka bedel, abaabulo, caleenta iyo sawiro.
Qalabka multi-taabashada kuu ogolaanayaa inaad si ay ula qabsadaan gaadhista iyo midabkiinaba, iyo codsan saamaynta qurux badan in ay sawiro aad. Si qeybo ka mid ah sanam la beddelo, aad si fudud u baahan doonaa in uu taabto oo jiidayo. Baaqa ah waxaa loo isticmaali karaa si ay ula qabsadaan diirimaad, Timirtana Fiiddeeda ah iyo daruuraha buluug eegista. Wixii sixitaan midabka saxda ah, kaliya aad u baahan tahay inaad jiidi loupe dheelitirka cad. Oo waxaa ugu fiican waa in dhammaan isbeddellada ah in aad sameyso sawir waa nondestructive.
Baro wax badan oo ku saabsan iPhoto >> ( https://itunes.apple.com/us/app/iphoto/id497786065?mt=8 )
Ka iPad Bedelka Music inay Lugood in 3 Talaabada Simple
> Resource > iPad > Top 7 Apps in Edit Photos on iPad